Yintoni i-Solder Mask kwaye isetyenziselwa ntoni?
Imasti yeSolder yinxalenye ebaluleke kakhulu yeebhodi zeesekethe eziprintiweyo zePCB, Akukho mathandabuzo okuba iSolder mask iya kunceda ekuhlanganiseni, nangona kunjalo yintoni enye eyenziwayo kwimaski ye-solder? Kuya kufuneka sazi ngakumbi ngemaski ye-solder uqobo. Wha ...
Yeyiphi eyona nto idumileyo yeCCL isetyenziselwa i-PCB?
Kwintsimi yeebhodi zesekethe ze-elektroniki, ukuze kuhlangatyezwane nemfuno engaphezulu yemveliso, ii-CCLs ezininzi ziyakhukhula kwimarike. Yintoni iCCL? Yeyiphi eyona CCL idumileyo kwaye inexabiso eliphantsi? Isenokungagxili kwiinjineli ezininzi ezincinci ze-elektroniki. Apha, uya kufunda okuninzi ...
Yintoni ekufuneka siyazi Chinese PCB umenzi?
Ngokukhula ngokukhawuleza kwetekhnoloji ye-elektroniki eChina.Ngaphezulu nangaphezulu abavelisi be-PCB base China banikezela ngenkonzo yabo engcono kubathengi kwihlabathi liphela.Kodwa yintoni ekufuneka siyazi malunga nomenzi wePCB waseTshayina xa ejongene nabo? ...
Kutheni le nto iPhaneli iphaneli njenge-tab-routing?
Kwinkqubo yokuvelisa i-PCB, sikhutshiwe ukuba sicwangcise i-PCB njenge-tab -routing yokujongana neebhodi zethu edge.here siza kukunika intshayelelo eneenkcukacha zenkqubo ye-tab -routing. Yintoni i-tab routing? ...
Kutheni ukutyabeka ngokuhambelana kubalulekile kwiPCB?
Kwiinjineli ezininzi ze-elektroniki, mhlawumbi, zinobuchwephesha ekuyileni iibhodi zazo zePCB, kwaye ziyazi ngokuchanekileyo ukuba zeziphi na indawo eziza kusebenza kuyo i-PCB yazo, kodwa abanalo nofifi lokuba bangazikhusela njani iibhodi zesekethe kunye nezinto kunye nokwandisa. ..
Kutheni i-BOM isisitshixo seNdibano ye-PCB
Yintoni i-'Bill Of Materials -BOM 'BOM luluhlu olubanzi lwezixhobo, izinto kunye neendibano ezifunekayo ukwakha, ukuvelisa okanye ukulungisa imveliso okanye inkonzo. Umthetho osayilwayo wezixhobo uhlala uvela kwifomathi yokuphakama, nenqanaba eliphezulu ...
Indlela ukufumana PCB yoMvelisi China?
Kule mihla, ngokunyuka okumangalisayo kweemfuno zePCB. Ngakumbi nangakumbi abavelisi PCB ziyavela, ingakumbi China leyo yaziwa ngokuba mveliso zehlabathi. Abathengi kwihlabathi liphela bafuna i-PCB ekumgangatho ophezulu e-China, nangona kunjalo, singafumana njani ...